Vaovao - lokomena 3 izay tena mety amin'ny fahavaratra, mitomany ny hatsaran-tarehy!
Tsy mitovy amin'ny fahatsapana "mavesatra" amin'ny fararano sy ririnina, ny fahavaratra dia saika "mamelombelona" hanala azy, ary ny makiazy koa dia fironana amin'ny fahazavana sy mangarahara.
Fa na toy inona na toy inona mangarahara ny makiazy, ny fametrahana lokomena dia mbola dingana iray tsy maintsy ilaina amin'ny olona maro.
Amin'ny fahavaratra, aleon'ny olona ny loko "mamirapiratra sy miaina" noho ny loko manankarena.
Ka anio dia homeko anao Amway lokomena an-jatony yuan mety amin'ny fahavaratra.
Ny olona tena samy hafa amin'ny volon-kodiny dia voalamina miaraka ihany koa, izao ~ Mirary fambolena sambatra ho anao rehetra aho hhhhhhhh
Safidio ireo ho an'ny lokomena fahavaratra
Mamirapiratra molotra gloss rano fitaratra
Ny lokon'ny aviavy dia loko malaza amin'ny roa taona lasa, ny famirapiratan'ny loko dia tsy avo loatra, tsy misy fahatsapana fluorescence, mety tsara amin'ny fahavaratra!
Harena miloko aviavy mora vidy ity. Palitao manify misy makiazy tsotra sy makiazy maivana dia afaka manatsara ny endrikao. Ny tonony mena amin'ny palitao matevina dia ho hita miharihary. Ny lazaiko dia manana fahatsapana milay sy tsara tarehy izy io.
Na dia antsoina hoe glaze lip gloss lip aza ilay izy, raha ny marina dia tsy dia avo loatra ny fahatsapana ny fitaratra, dia hamorona sarimihetsika izy io. Ny diplaoma manalefaka dia tsara ihany, ary tsy hisy ny fampiharana tsy mitovy amin'ny fiatrehana olana kely toy ny tsipika maina sy ny peeling.
Ny hery mijanona dia tsara. Amin'ny ankapobeny dia azo atao izany raha tsy miraikitra amin'ny kaopy, fa misy ny olana mahazatra, dia ny fandokoana molotra. Izaho manokana dia nisedra azy imbetsaka. Marina izany, tsy mora ny mamoaka azy. Ireo mpamatsy vola izay miahy an'io dia tokony hitandrina amin'ny fambolena zavamaniry!
Amin'ny endrik'i Baipi, tena manam-pahaizana sy kanto ity iray ity. Raha fintinina, tsy afaka mandeha diso ianao rehefa mikimpy ny masonao.
Amin'ny tarehy mavo, na dia tsy nakarina toa ilay tarehy fotsy aza, ity fahatsapana ambany sy manintona ity dia mahavariana ihany koa!
Ny molotra mavo sy mavitrika maherifo an'ny heroine
Malaza be izao lip gloss izao, tsy lafo ny vidiny, tsara tarehy ny lokon'ny loko, ary isaky ny mivoaka ny loko vaovao dia afaka mandoa an-tsitrapo aho.
Ny tsaramaso mena dia loko vaovao navoaka taloha kelin'izay. Izy io dia loko mamy be mamirapiratra miaraka amina loko mavokely kely ao anatiny. Ho hita miharihary kokoa rehefa mifono matevina izy io, ary ho mavesatra ny tonony volondavenona rehefa mifono matevina. Hisy karazana eo am-bava. Ilay fahatsapana manjavozavo.
Toy ny volon'ny molotra teo aloha, dia tena tsara ny firafitry ny lokon'ny molotra. Rehefa apetrakao am-bava dia hisy fahatsapana misento, ary ny molotra dia hifantoka mivantana malefaka ao anatin'ny iray segondra.
Ny hery mijanona dia tsy ratsy, handoto kely ny kaopy, izay ao anatin'ny faritra azo ekena.
Tsy miloko mihitsy io loko io, na dia misy naoty rose aza ao aminy, dia mbola milay amin'ny hoditra mavo hatrany izy. Ary ny hery miafina miloko koa tena tsara, ny lokon'ny lokon'ny molotra mihitsy dia tsy hisy fiantraikany be aminy.
Rano mamirapiratra molotra mamirapiratra
Nanoro hevitra an'ity andiana tantara an-tsehatra fanta-daza molotra im-betsaka ity isika taloha, toy ny: tsiky tsy misy tavy, maharitra telo teboka, fitsambikinana mitsivalana ary isa maro hafa, ary matetika no ataoko ao anaty kitapoko.
Mba hilazana ny marina, ny isa miloko amin'ity andiany ity dia tsara loatra amin'ny anarana! Ity #PinkS Sleepwalk ity dia loko vaovao amin'ny torimaso antoandro. Tiako aloha. Ny loko mavokely dite apricot dia tsy mahery setra, miaraka amina gloss mangarahara be, manana ny tsiron'ny fahavaratra izy io!
Azoko atao ny manoro hevitra ny firakotra matevina na ny sarona sosona ho an'ity, satria raha mifono manify izy io, ankoatry ny fanaovana ny vava ho feno rano, dia mety ho manirery ny loko.
Ny endriny dia mitovy amin'ny volon'ny molotra, fa tsy mifikitra. Aorian'ny fampiharana azy dia hisy horonantsary malefaka kokoa hatsangana rehefa afaka kelikely, miaraka amin'ny fahatsapana toy ny fitaratra.
Saingy heveriko fa ny ilaina amin'ny fampiasana azy dia ny mampihatra indray, satria ny tanjaka maharitra dia tena ankapobeny, mora kokoa ny mihetsika, ary azo apetraka amin'ny kely sy imbetsaka izy io, ary ny palitao matevina dia tsy hahatonga ny molotra hahatsiaro ho maivana.
Ity dia tsy mifidy ny lokon'ny hoditra, fa mora voan'ny lokon'ny lokon'ny molotra mihitsy.
Raha somary maizina ny lokon'ny molotrao dia mety ho lasa gloss mangarahara miaraka aminy izy io, ampiasao fotsiny mba hametahana lokomena matte, izay safidy mety ihany koa.
eyeliner, lipgloss, kapoka mink, Volomaso maso, Mpivarotra volomaso, Fanitarana volomaso,